Drafitra CURRENCY DIGITAL - World Trade Exchange
manomboka DIGITAL Banky CURRENCY!
Tongava tompon'antoka amin'ny banky anio!
Amin'ny maha tompon'ny a banky, ianao dia ho:
Mahaiza manome trosa $ 10M ka hatramin'ny $ 100B an'ny orinasanao izay tsy mila averina aminao… Tsy misy fetran'ny trosa. Tsy mandany zanabola. Tsy misy fanamarinana bola. Tsy misy fankatoavana trosa. Tsy misy sarany indram-bola na fanodinana. Tsy misy trosa. Tsy misy famerenam-bola.
Mahazoa vola an-tapitrisany dolara isam-bolana amin'ny alàlan'ny fanomezana $ 10M ka hatramin'ny $ 100B amin'ny trosan'ny orinasa hafa.
Miteraha vola mitentina eo no ho eo sy tombony azo avy amin'ny rivotra manify mampiasa volan'ny olon-kafa.
Manana ny iray amin'ireo orinasa manankarena indrindra sy manaporofo ny fitotonganana manerantany - Banky.
Mandidia fahatokisana eo noho eo, fanajana ary fahefana eo amin'izay rehetra alehanao amin'ny maha-tompona banky anao.
Hatao ho mpiara-miasa matanjaka sy fifandraisana sarobidy.
Fananarana sy fanararaotana Wield hanokatra varavarana maro ho anao sy olon-kafa.
Ny tombony ara-bola, ny fahefana, ny fitaomana ary ny harena azonao amin'ny banky DC anao dia voafetra ihany amin'ny sainao.
INONA NY Banky nomerika nomerika?
Ny Digital Currency Bank dia sehatra kendrena marobe izay afaka manampy anao mamorona vola amin'ny rivotra manify ao anatin'ny 60 segondra amin'ny tsindry bokotra iray. Azonao atao ny mampiasa ny Digital Currency Bank hamoronana $ 1M, $ 10M, $ 100M, $ 1B, $ 100B, na mihoatra ao anatin'ny 60 segondra amin'ny tsindrio bokotra iray.
Miaraka amin'ny Banky nomerika nomerika anao manokana, azonao atao ny:
Mametraha vola amin'ny vola dizitaly izay tohanan'ny fitokisan'ny orinasa lehibe, ny fananan'ny orinasa ary ny fotodrafitrasa matanjaka manerantany.
Mividiana fananana, vokatra na serivisy amin'ny orinasa an-tapitrisany mampiasa vola dizitaly.
Ampitomboy ny vola azo amin'ny 100X na mihoatra amin'ny fampiasana vola dizitaly
Famatsiam-bola ny varotra rehetra ataonao raha tsy misy andrim-panjakana ara-bola.
Omeo indram-bola sy serivisy ara-bola ny olona sy ny fikambanana manerantany.
Ny vola dizitaly mividiana vola amin'ny currency fiat na manova vola digital ho cash.
Midira amin'ny tsena manerantany izay mampivondrona ireo banky, andrim-panjakana hafa ara-bola, orinasa, mpamoaka entana, mpividy ary mpivarotra vola samy hafa raha vao mahatratra ny fotoan-tsarotra.
Manaova asa ara-bola tsy tambo isaina izay natokana ho an'ny banky lehibe.
Avadiho ho lasa vola ny vola nomerika ao anatin'ny 60 segondra!
Ny olana lehibe ananan'ny ankamaroan'ny olona rehefa manome, mividy, ary mivarotra vola dizitaly dia mamadika azy ho vola. Amin'ny DC Bank, azonao atao izao manaraka izao:
Ampiasao ny fifanakalozam-bola nomerika hanovana ny vola digital ho Cash: Ny Digital Currency Bank dia manome anao Exchange Digital Currency noho ny fanovana ny vola dizitalinao ho vola ao anatin'ny 60 segondra ary nafindra tany amin'ny kaonty banky eran'izao tontolo izao ao anatin'ny 24 ora.
Mampiasà carte de debit DCB Visa hanovana vola digital ho Cash: Ny Digital Currency Bank dia manome karatra debit debit miaraka amin'ny marika Visa. Ny karatra debit debit miaraka amin'ny marika DCB dia manamora sy haingana ny famadihana ny volanao nomerika ho lasa currency fiat: Euro, British pounds, ary US Dolara.
Fanesorana ATM: Ny karatra DCB Visa dia mamela anao handany ny volanao nomerika any amin'izay toerana rehetra ekena ny Visa. Miaraka amin'ny karatra DCB Visa anay, afaka mandoa vola eo an-toerana ianao manerana an'izao tontolo izao. Afaka manao fisintahana ATM ianao manerantany. Azonao atao ny mitantana ny fifandanjan'ny vola nomerika sy ny vola fiat amin'ny toerana iray, mifanakalo vola ary mifanakalo eo amin'ny kaonty ao anatin'ny segondra.
Maninona no manana banky mandritry ny varotra?
MITSANGA DOLLARA AN'arivony tapitrisa!
Ny mpanjifanay, mpamatsy fiara manerantany dia nampiasa ity sehatra ity hanangonana $ 241 tapitrisa.
Orinasa orinasam-pirenena maro no nampiasa an'ity sehatra ity hanangonana $ 2.4 miliara.
Orinasa misahana ny sehatry ny solika no nampiasa an'ity sehatra ity hanangonana 3.15 miliara dolara.
Orinasa biofarmasy iray no nampiasa an'ity sehatra ity hanangonana $ 1.8 miliara.
Mpanamboatra vokatra indostrialy no nampiasa an'ity sehatra ity hanangonana $ 23 tapitrisa.
Orinasa mpanamboatra vy no nampiasa an'ity sehatra ity hanangonana $ 14.8 tapitrisa.
MAHASOA NY TSY AZO ATAO!
VAHAO NY OLANA REHETRA!
Orinasa mpanao trano no nandoa trosa 7.2 miliara dolara tamin'ny banky tao anatin'ny 30 andro tamin'ny fampiasana vola manokana tamin'ny alàlan'ny WTE sehatra.
Orinasa solika no nahazo fotodrafitrasa vaovao mitentina 3.5 miliara dolara ao anatin'ny 30 andro.
Orinasa mpampitan-tsambo fiaramanidina manokana no nahazo fiaramanidina manokana 23 mitentina 575 tapitrisa dolara.
Mpanamboatra vokatra indostrialy iray no nahazo milina, fitaovana ary famokarana turnkey vaovao 578 tapitrisa dolara.
Orinasa mpamokatra orinasa iray no nahazo orinasa methanol mitentina 235 tapitrisa dolara.
Vao tsy ela akory izay ny orinasan-tsolika dia nahazo fitrandrahana solika maodely ho an'ny solika solika izay manana 20,000 famokarana BPD.
Giovanni dia nahazo orinasam-pividianana vola mitentina 123 tapitrisa $ 250 miaraka amina mpiasa 768.
Orinasa mpamokatra vy dia nohavaozina ny fahafahan'ny zavamaniry miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina $ 75 tapitrisa hampitomboana ny fahafaha-mamokatra.
AOKAO bebe kokoa ny fidiram-bolanao amin'ny 100X!
Orinasa mpivarotra ho avy dia nampitombo ny vola azony tamin'ny 100X ary nahazo karama $ 1.2B tao anatin'ny 24 ora.
Mpanamboatra elektronika dia nampitombo ny vola azony tamin'ny 100X ary nahazo vola $ 750M tao anatin'ny 24 ora.
Ny Contractor général dia nampitombo ny fidiram-bolany tamin'ny 100X ary nahazo vola 640M $ ao anatin'ny 24 ora.
Manome anao ny tombony ny vola niomerika ary ahazoam-bola “fiara”- izany dia afaka mitondra anao any amin'ny avo amin'ny fidiram-bola stratospheric. Azonao atao ny mampiasa azy io hampitomboana ny vola miditrao amin'ny 100X ao anatin'ny 24 ora ary hametraka vola amam-bolam-baravarana ao amin'ny kaontinao isaky ny tianao!
Mamorona hery mividy tsy voafetra!
Rehefa manana Banky Digital Currency ianao dia afaka mamorona fahefa-mividiana tsy voafetra, fahefana mindrana, ary trosa asa-bolamena 24 karat - araka izay itiavanao azy, isaky ny mila izany ianao raha mila izany. Isaky ny ilainao izany. Azonao atao, amin'ny fomba ara-bakiteny, ny manoratra ny tsipika fampindramanao (na ny fanamarinana) amin'ny ambaratonga tsy manam-petra sy mahakivy.
Ny vola dizitaly dia manome ny fahefana mividy REHETRA ilainao!
Isaky ny te hividy (na mila) mividy fananana, vokatra na serivisy ho an'ny orinasanao ianao, ho an'ny orin'olon-kafa, ho an'ny orinasan'ny mpampiasa anao, na ny filanao manokana na olon-kafa manokana - azonao atao ny mampiasa ny Digital Currency Bank hamoahana “ vola dizitaly ”izay avotan'ny mpividy amin'ny fividianana ho avy ny entanao (na orinasa na olona hafa) amin'ny vidiny feno" vidin'ny tsena "hividianana izay tianao hovidiana.
Manomboka amin'ity andro ity dia manana ny fahefana mividy rehetra ilainao ianao!
Manomboka amin'ity andro ity dia efa
Ny fahefana mividy rehetra ilainao!
Aza mindrana intsony!
Raha vantany vao manomboka mamoaka ny volanao nomerika ianao handaminana ny asanao sy ny fifanakalozana ara-bola ataonao manokana, dia tsy mila miankina amin'ny findramam-bola intsony ianao intsony. Tsy mila miandry intsony ny kaontinao any amin'ny banky ianao vao afaka mividy fananana, vokatra na serivisy REHETRA izay ilanao na ny orinasanao - na tadiavinao raha mampiasa ny vola manokana ianao.
Tsy mila manana dime ao amin'ny kaontinao any ivelany intsony ianao mba hahazoana entana na serivisy tsy manam-petra ara-dalàna.
Tsy mila mitrosa fankatoavana trosa be intsony ianao, fandaniana zanabola, sarany fanodinana sns ... satria ny volanao manokana manokana dia "ankatoavina" (tsy lavina mihitsy) ary tsy misy zanabola mihitsy.
Tsy hisy hangataka mihitsy ny hahita ny fanambaranao ara-bola na hampanantena fananana anao, na hiantoka manokana ny raharaham-barotra ataonao. Noho izany, ambany ny loza mety hitranga aminao - na tsia!
Tsy hisy hanontany anao momba ny trosanao na ny fahafahanao mandoa. Tsy hisy valin-drihana apetraka amin'ny haavon'ny fividiananao koa. Noho izany, voafetra ihany ny herisetrao, ny fahaizanao mamorona, ny herinao ary ny fanirianao hanatratra na hambinina. Ny lanitra tokoa no fetra!
Zavatra 50 azonao atao
Ny Banky nomerika anao!
Azonao atao ny mampiasa DC BANK TO:
Mamorona vola "vola" na "vola" amin'ny rivotra manify, ara-dalàna ao anatin'ny 60 segondra na latsaka!
Ampitomboy ny fidiram-bola amin'ny 100X ao anatin'ny 30 andro miaraka amin'ny tsindry tokana!
Arovy ny famatsiam-bola tsy misy zanabola (manomboka amin'ny $ 1,000,000 ka hatramin'ny $ 100 miliara)!
Soraty ny tsipika fampindramam-bola tsy voafetra sy ny fahefa-mividiana (tsy misy trosa)
Mahazoa fampindramam-bola sy trosa arahin'antoka 0% sy fehezan-teny malefaka.
Apetraho ao anaty kaonty any amin'ny banky ny vola amam-bolanao isaky ny misy!
Asandrato ao anatin'ny 60 segaondra ny sandam-bola rehetra hividianana vola!
Mamorona, mitahiry azo antoka, mandefa ary mifanakalo ny fananana ara-bola eto an-tany.
Mamoaka fitaovana fandoavam-bola toy ny karatra Visa sy MasterCard.
Omeo serivisy fampindramambola sy zanabola tsy misy zanabola amin'ny orinasa amin'ny vidiny aotra!
Avadiho ho vola ny trosa varotra. Hanova vola ho varotra varotra.
Mifindra vola sy fananana erak'izao tontolo izao amin'ny fiainana mora sy tsiambaratelo.
Manaova fandoavam-potoana, fandaniam-bola ary fandefasana sisintany.
Manamora ny varotra iraisam-pirenena sy ny fandoavam-bola eo amin'ny orinasa samihafa.
Manamora ny fifanakalozana trosa arahin'orinasa samy hafa mpikambana.
Mampiasà sehatra fandoavam-bola iraisam-pirenena ho an'ny orinasan'ny mpikambana.
Manaova hetsika ara-bola izay natokana ho an'ny banky matetika.
Mifindra ny sanda eo anelanelan'ny antoko sy ny fepetra voafaritra mialoha. Ireo fandoavam-bola ireo dia azo alefa mandeha ho azy sy fehezina miorina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny famandrihana sy ny tsindry efa voapetraka mialoha
Alefaso sehatra valisoa ho an'ny taranaka fara-mandimby amin'ny famoahana valisoa tsy fivadihana ho vola nomerika.
Ampahafantaro ny mpanjifa mividy, mivarotra, teboka varotra, ampandrenesina momba ny fifampiraharahana vaovao, na hanakalo valisoa ho an'ny vola na entana any amin'ireo mpivarotra antsinjarany.
21. Mividy fananana, fananana, vokatra ary serivisy tsy misy vola.
22. Manambola amin'ny orinasa sy tetikasa vaovao nefa tsy mila vola.
23. Makà ary ampandehano ny asan'ny orinasa mpamokatra entana tsy misy vola!
25. Aloavy ny trosan'ny trosany rehetra tsy andoavam-bola.
26. Makà fihenam-bidy hatramin'ny 90% amin'ny vokatra na serivisy rehetra vidiny!
28. Avereno ny trosa rehetra amin'ny fandaminany!
29. Avereno ny vola voasakana ao anatin'ny 24 ora amin'ny vidiny aotra!
30. Esory ny loza mety hitranga amin'ny fandoavam-bola amin'ny fandoavan-potoana.
31. Avereno ny fananana tsy mandeha amin'ny sanda boky feno ao anatin'ny 24 ora!
32. Mihodina orinasa tsy mahomby ao anatin'ny 24 ora!
33. Ahenao ara-dalàna ny trosan'ny orinasa!
34. Hanitatra ny varotra na ny fivarotany an-tsena raha tsy mivoaka ny vola.
35. Ampitomboy 10,000 XNUMX% ny fidiram-bolan'ny orinasa sy ny tombom-barotra!
36. Amidio ny vokatra, serivisy, orinasa ary fananany rehetra ao anatin'ny 24 ora.
37. Ario ny 12 volana novinavinaina ho tahiry, fahaiza-manao tafahoatra, vokatra miadana na mihoatra ny vokatra ao anatin'ny 24 ora.
38. Mahatratra ny vinavinan'ny mpivarotra 12 volana ao anatin'ny 24 ora.
39. Avadiho ho vola feno ao anatin'ny 24 ora ny vola aloa!
40. Avereno ny fampindramam-bola ratsy ary avadiho ho lasa vola na fananana ranon-javatra eo noho eo ao anatin'ny 24 ora ny fananana ketraka.
41. Ampiasao ny tsenan'ny volan'ny banky anao na ny volan'ny mpiara-miasa mahazatra - na miasà ho mpamatsy vola ho an'ny vola iraisam-pirenena.
42. Mirotsaha amin'ny hetsika arbitrage misy ny hetsika fifanakalozam-bola, fiarovana ara-bola, na fiara fampiasam-bola hafa.
43. Mividy sy mividy ny orinasa, ny fananana ary ny trosa amin'ny olona na orinasa rehetra.
44. Mitazona fananana na karazana fiasa ara-barotra na ara-bola hafa ary manome tapakila amin'izany (SKR's)
45. Midira amin'ny raharaham-barotra sy amin'ny raharaham-barotra hafa miaraka amin'ny fahefam-panjakana na olona ary mahazo na miditra amin'ny sata, fifanarahana, zon'olombelona, ​​fahazoan-dàlana, fahazoan-dàlana, fahazoan-dàlana, fahazoan-dàlana ary fanomezana ho an'ny tanjona rehetra.
46. ​​Vidio sy amidio ny faktiora, naoty, ary ny trosa amin'ny orinasa rehetra (fantatra ihany koa amin'ny "ara-barotra").
47. Midira ao amin'ny tontolom-barotra mahasoa amin'ny tsena fifanakalozam-bola avy any ivelany raha mankafy ny tombony miafina ananan'ny banky mihoatra ny olona tsirairay.
48. Fehezo sy teneno izay ataon'ny bankyo sy lazainy momba anao!
49. Manao asa ara-bola tsy tambo isaina, izay mazàna natokana ho an'ny banky lehibe.
50. Ankafizo ny hery, ny fitafiana ary ny voninahitra rehetra mifandraika amin'ny banky.
HITANAO NY FANAOVANA AZY?
inona no ho azonao rehefa manambola ianao
Ao amin'ny banky momba ny CURRENCY DIGITAL.
vola digital BAT PLATFORM.
Ny Digital Currency Bank dia natao hanomezana hery anao:
Omeo ny volanao nomerika.
Famatsiam-bola ny fifanakalozana orinasa amin'ny alàlan'ny vola nomerika tsy misy banky sy andrim-bola
Ity no banky voalohany mifototra amin'ny vola nomerika eran'izao tontolo izao, ahafahan'ny olona manokatra kaonty fanaraha-maso vola nomerika sy tahiry ary mahazo zanabola isan'andro amin'ny vola dizitaly. Azonao atao ny miasa toy izany amin'ny banky manana fahazoan-dàlana feno ary manolotra serivisy amin'ny banky ho an'ny olona tsy miankina sy orinasa manerantany.
Serivisy famoahana debit sy carte de crédit
Famoahana ny antoka ara-bola sy ny fitaovana
Kaonty (fanamarinana) kaonty, kaonty amin'izao fotoana izao, ary kaonty tahiry
Safidy famindrana banky mora eo anelanelan'ny kaonty ao amin'ny Bank sy ny tontolo iainana manontolo
Ny zanabola avo indrindra amin'ny indostria
Mpivarotra & Serivisy fanodinana vola.
Avadiho ho vola ny vola dizitaly!
Ny olana lehibe ananan'ny ankamaroan'ny olona rehefa manome, mividy, ary / na mivarotra vola nomerika dia mamadika azy ho vola. Ity Digital Currency Exchange ity no vahaolana farany hanovana ny volanao nomerika ho vola ary ny mifamadika amin'izany. Manome anao ny safidy famoronana vola, rafitra, fitaovana ary loharano ampiasain'ny orinasa Fortune 500 hanovana ny volan'izy ireo ho vola. Azonao atao ny mamela ny mpanjifanao hahazo zanabola isan'andro, manao fifanakalozam-bola eo noho eo, mividy / mivarotra vola amin'ny carte de debit sy carte de crédit ao anatin'ny Digital Currency Exchange.
FIVAROTANA momba ny CURRENCY digital
Aorian'ny famoronana ny volanao nomerika (vola), ny dingana manaraka dia ny fandaniana azy na ny fanovana azy ho vola. Eo no miditra ny tsenan'ny vola nomerika anao.
Ny tsenan'ny vola nomerika dia fikambanana mpikambana izay nifanarahan'ny mpikambana hividy sy hivarotra fananana, vokatra ary serivisy isan-karazany tsy misy vola fa mampiasa ny volanao nomerika noforoninao manokana ho fampitaovana Exchange.
WTE dia hanome anao tsena nomerika nomerika ary hampifangaro azy amin'ny WTE sehatra.
Ny tsenan'ny volanao manokana dia mitovy amin'ny tranokala e-varotra tianao toa an'i Amazon na eBay. Ahitana fisoratana anarana ho an'ny mpampiasa, fitantanana lisitra, fikarohana feno, naoty, tolotra asongadina, fihenam-bidy, baiko mividy, kaomandy, faktiora, tantaram-pifanakalozana, fanodinana fandoavam-bola, ary ireo fiasa maro hafa izay mahatonga azy io ho vahaolana tokana ho an'ny tsenan'ny volanao manokana.
Azonao atao ny mividy saika ny zavatra tadiavinao amin'ny alàlan'ny tsenan'ny vola nomerika nefa tsy mandoa vola fa mampiasa ny volanao nomerika. Raha tsy izany, azonao atao ny manova ny vola nomerika ho vola amin'ny alàlan'ny fifanakalozam-bola dizitaly.
Sehatra DC Banking
Ao amin'ny ivon'ny "banky mifototra amin'ny vola nomerika," dia ho hitanao ny sehatra Banky, izay natao ho rindrambaiko banky an-tserasera mpampiasa indrindra eto an-tany - tsy ho an'ny farany ihany- mpampiasa fa koa ho anao, mpitantana ny banky. Azonao atao ny mampiasa azy io hamoronana sy hitazomana ny mombamomba ny mpanjifa sy ny kaontiny, hitantanana ny rafitry ny sarany ary hanarahana ny vola miditra. Ny sehatra dia miorina amin'ny tranokala 100% ary voahodina amin'ny alàlan'ny encryption SSL amin'ny banky. Io dia ahafahanao manao famindrana vola eo noho eo eo amin'ny kaonty na amin'ny mpampiasa hafa, ary koa amin'ny alàlan'ny famindrana tariby any amin'ny banky hafa manerantany.
Ny sehatra DC Banking dia manohana sampana maro; kaonty amin'ny mpitantana marobe miaraka amina asa sy haavon'ny fanomezan-dàlana samy hafa. Ny saram-pandraharahana rehetra mifandraika amin'izany dia azo alamina ao amin'ny sehatry ny admin ary ampiharina ho azy rehefa tanterahina ny fifanakalozana. Ny mpanjifa dia azo sokajiana ao anaty vondrona mombamomba azy samy hafa, mamela ny fandaharam-potoana isan-karazany ho an'ny karazana mpanjifany (oh: manokana sy orinasa). Ny rafitra dia manohana vola sy fifanakalozam-bola marobe. Azonao atao ny manamboatra ny rafitra afaka segondra amin'ny fanovana ny loko loko sy amin'ny fampidirana ireo logotypes anao manokana ao amin'ny sehatry ny admin.
Teknolojia famindrana vola
Ity teknolojia famindrana vola ity dia ahafahanao mandefa famindrana eo noho eo ho an'ny namanao, ny mpanjifanao ary ny mpiara-miasa aminao eo amin'ny Bank, Exchange, Wallet, System Payment, ny application banking mobile, sns.
Famindrana eo noho eo eo anelanelan'ny vokatra Digital Currency.
Famindrana fiat eo noho eo ao anatin'ny ekosistra Digital Currency.
Mandefasa vola nomerika amin'ireo namanao sy orinasao amin'ny alàlan'ny mailaka ary araho moramora ny fiovan'ny vidiny ao amin'ny portfolio-nao nomerika.
Fampandrenesana mailaka momba ny famindrana, fametrahana ary / na fisintahana.
Azo alaina amin'ny finday smartphone sy tablette.
Famindrana vola eo noho eo amin'ny alàlan'ny nomeraon-telefaona - UF-YTBI.
Fandraisana amin'ny MasterCard® sy VISA® famoahana sy sehatra fitantanana karatra
Ny orinasanao dia afaka manomboka mamoaka karatra MasterCard sy Visa miaraka amin'ny anaran'ny orinasanao sy ny logo misy marika marika amin'ny karatra rehetra omena ny mpanjifa manerantany. Ny tompon-karatra dia afaka misintona vola amin'ny ATM rehetra ary miditra amin'ny fidiram-bola isaky ny fivarotana antsinjarany.
KODE IDENTIFIER BANK (BIC)
Hosoratanay ny kaody Bank Identifier (BIC) ho an'ny orinasanao ara-bola amin'ny SWIFT®. Ny BIC anao dia hiantoka fa ny orinasanao dia azo fantarina ao amin'ny lahatahiry sy tahiry amin'ny banky ary hanampy ny fahamendrehana sy ny fivoahana tsara. SWIFT® dia kaoperativa an'ny mpikambana miorina any Bruxelles, Belzika. Ny rafitra SWIFT® dia ampiasain'ny Banky 10,000 209, andrim-panjakana fiarovana ary mpanjifa orinasa any amin'ny firenena XNUMX isan'andro hanakalo hafatra ara-bola an-tapitrisany.
WEBSITE BANK DC
Hanome anao tranokala fandraharahana kilasy eran'izao tontolo izao izahay izay homena marika amin'ny antsipirian'ny orinasanao ary azo alaina amin'ny anaranao. Ny tranokala dia hahafahanao mampiroborobo ny serivisinao amin'ny maha-mpamatsy trosa sy serivisy ara-bola tsy misy zana-bola ho an'ny olona sy orinasa hafa.
Ekipa mpitantana ny banky
Hanana ekipa mpitantana banky manao 100% amin'ny asa ao amin'ny Banky Digital Currency ianao. Izy ireo no hitantana sy hiasa ny Banky Digital Currency 24/7/365. Hatsipin'izy ireo aza ny vola namboarina tao amin'ny kaontinao any amin'ny kaontinao fa TSY mila mandray telefaona hiresahana amin'ny olona rehetra ianao.
Noho izany, tsy misy fahalalana taloha, tsy misy traikefa teo aloha, tsy fahaizana teknika ary tsy mila fampiasam-bola fanampiny avy aminao hampandeha ity Banky Digital Currency ity satria manohana sy mitantana tanteraka ny asanao amin'ny banky sy ny lafiny teknika rehetra momba izany izahay. taona voalohany.
Ity ekipa ity dia hitantana ny asan'ny bankinao iray manontolo ary hanohana ny sehatra misy anao 24/7/365.
Ny ekipa mpitantana anao dia hanao 100% amin'ny asa takiana amin'ny fanombohana sy fampandehanana ny Banky Digital Currency amin'ny anaranao. Ny ampahany tsara indrindra dia tsy mandray afa-tsy 50% amin'ny vola miditra ao amin'ny orinasao izahay ho sandan'ny fitantananay.
Banking-kafatra mifanitsy sy fanodinana vola
Hanampy anao izahay hampifandray ny orinasanao amin'ny rafitra banky manerantany handraisana sy handefasana vola amin'ny vola rehetra amin'ny alàlan'ny tamba-jotra 200+ banky manerantany miaraka amin'ireo fotodrafitrasa efa misy any amin'ny firenena 150. Io dia hahafahanao manao ny fametrahana banky eo noho eo.
VONINAHIN'NY TRANO-TRANO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO
Fenoy miaraka amin'ny torolàlana isaky ny dingana, fampisehoana video, rindrambaiko demo, bokikely, boky torolàlana, torolàlana, fitaovana, fizotra, rafitra, sora-baventy, fifanarahana, taratasy fangatahana mpanjifa, takelaka.
FAMPANDROSOANA GLOBAL HO AN'NY fandoavam-bola ao amin'ny 200+ TANANA
Hampifandraisinay amin'ny orinasanao Earthport ny orinasanao, izay hahafahanao miditra amin'ny banky eo an-toerana amin'ny firenena 200+. Azonao atao ny mandefa sy mahazo vola amin'ny vola 30+ miaraka amin'ny tsindry bokotra iray fotsiny - amin'ny fampiasana kaonty iray any amin'ny firenena 200 mahery.
Fonosana famantarana ny banky
Izahay dia hanome anao fonosana famantarana orinasa ho an'ny Digital Currency Bank. Ity fonosana momba ny orinasa ity dia ahafahanao mampita ny fisianao matihanina eo imason'ny mpanjifanao. Anisan'izany ny karatra fandraharahana, lohan-taratasy ary valopy misy ny mombamomba anao momba izany. Hanome anao fonosana izahay izay hametraka ny fanatrehanao avy hatrany amin'izay olona sendra anao.
Hanana ny fidirana amin'ny dashboard admin anao ianao, izay manasongadina ny fanadihadihana angona momba ny Digital Currency Bank. Azonao atao ny miditra amin'ny dashboard admin amin'ny fotoana rehetra hijerena ireo antsipirian'ny lafiny rehetra ao amin'ny bankinao. Azonao atao ny mijery ny zava-bitan'ny orinasanao amin'ny fotoana tena izy 24/7. Ny motera birao any avaratra dia manome anao fahitana tena izy amin'ny ambaratonga tsirairay amin'ny zava-bitan'ny banky sy ny ekipanao, manomboka amin'ny famintinana ka hatramin'ny antsipiriany, amin'ny alàlan'ny tabilao mifototra amin'ny sehatra ara-bola sy asa mifototra amin'ny asa aman-draharaha ary ny tatitra momba ny Banky Digital Currency manontolo amin'ny fotoana tena izy.
TOOLKIT ATTRACTION BUSINESS
Ity toolkit ity dia misy fitaovana ahafahan'ny orinasa manatona anao amin'ny tsindry bokotra iray. Ity toolkit ity dia hanampy anao hisarika ny fitarihana hafanana ambony indrindra hampiakatra haingana ny fahombiazanao.
FAHAIZANA, FAHALALANA, TOOLY, ary loharano ahazoana miasa amin'ny banky vola DIGITAL!
Handray programa fanofanana feno momba ny lafiny rehetra amin'ny fanombohana sy fampandehanana sehatra vola tsy miankina tena mahomby ianao.
Hahazo torolàlana amin'ny dingana manaraka ianao amin'ireto manaraka ireto:
Ahoana ny fomba famoahana sy fanaraha-maso ara-dalàna ny Banky nomerika anao.
Ahoana ny fomba anaovan'ny orinasa an'arivony milahatra ary mangataka aminao hampirona anao hiditra ao amin'ny Digital Currency Bank ao anatin'ny 24 ora.
Ny paikady mitentina 300 miliara dolara amin'ny fananganana Banky Digital Currency mahomby.
Ahoana ny fampiasana ny Digital Currency Bank anao hampitombo ny vola miditrao amin'ny 100X ao anatin'ny 24 ora.
Fomba fampiasana ny Digital Currency Bank anao hanangonana $ 1M ka hatramin'ny $ 100Bn amin'ny renivola fandraharahana avy amin'ireo andrimpanjakana ara-bola hafa ao anatin'ny 24 ora.
Ahoana ny fanovana ny volanao nomerika ho vola. Fomba iray amby telopolo hanovana ny volanao manokana ho vola.
Ahoana ny fampiasana ny Digital Currency Bank anao hahazoana fananana, trano, trano, entana, ary serivisy, ao anatin'izany ny dia lavitra, entana sy fitaovana amin'ny kapitalina, fiara mihaja, elektronika ary koa ny orinasa iray manontolo.
Ahoana ny fomba hitantanana an-tsokosoko ny vokadroa-ketra ataon'ny Digital Currency Bank ary mijanona mahitsy miaraka amin'ny IRS.
… Ary maro hafa!
DIRECTORIANA 50 MILLION + ORINASA
Ity lahatahiry ity dia misy ny antsipirian'ny fifandraisana amin'ireo Mpanatanteraka orinasa maherin'ny 50 tapitrisa any Etazonia. Amin'ny alàlan'ity fidirana ity lahatahiry ity dia tsy mila mandany vola amin'ny fanaovana doka ianao na mandany fotoana mitady ny fitarika hifandraisana. Satria ao anatin'ny segondra vitsy dia azonao atao ny mitady ny antsipirian'ny fifandraisana amin'ireo mpitantana orinasa amin'ny indostria rehetra tadiavinao hanaovana orinasa.
Ny motera birao any avaratra dia manome anao fahitana tena izy amin'ny ambaratonga tsirairay amin'ny zava-bitan'ny orinasanao sy ny ekipanao, manomboka amin'ny famintinana ka hatramin'ny antsipiriany, amin'ny alàlan'ny tabilao mifototra amin'ny sehatra ara-bola sy ara-bola sy tatitra momba ny bankinao iray manontolo.
MATERIEL MARKETING $ 5M Ho an'ny klerjy misarika
Mahazo fitaovana ara-barotra an-jatony natao ho an'ny varotra toy ny brochure, fampisehoana PowerPoint, flyer, tatitra momba ny asa aman-draharaha, taratasy fotsy, boky torolàlana, sns. mpanjifa. Eto daholo izy io amin'ny endrika "vita ho anao" miaraka amin'ny endrika teny, vonona tanteraka hiaraka amina fanovana vitsivitsy fotsiny toy ny fanovana anarana sy adiresy.
fanohanana tsy voafetra 24/7/365!
Hanohana 24/7/365 ianao. WTEIreo Mpanolo-tsaina dia manana traikefa manokana momba ny vola tsy miankina amin'ny 38 taona ary tambajotram-pifandraisana tsy miankina afa-tsy amin'ny Etazonia sy manerana an'izao tontolo izao. Brainstorm, tamba-jotra, mamorona fiaraha-miombon'antoka iraisana ary mianatra avy amin'ny mamirapiratra indrindra amin'ny orinasa. Ireo mpanolo-tsaina anay dia hanampy anao amin'ny toe-javatra iainanao manokana – hamaha olana, hamaly fanontaniana, hanoro ny fotoana mety.
Hahazo valiny amin'ny fanontanianao rehetra momba ny paikady sy ny teknika ampiasaina amin'ny famoahana vola manokana ianao.
MANGATAKA AMIN'NY Banky Digital Currency
Voalohany, avereno jerena ny latabatra safidim-bola etsy ambany ary manapaha hevitra momba ny Banky Digital Currency tianao. Faharoa, mangataka amin'ny Digital Currency Bank amin'ny famenoana ny takelaka etsy ambany. Handefa anao ny antsipirian'ny fandoavam-bola izahay handoavana ny fahazoan-dàlana Digital Currency Bank.
Aloavy ny saram-pianianana LICENSE & SETUP
Takiana aminao ny fandoavana ny fahazoan-dàlana sy ny fametrahana ny saram-bolan'ny Digital Currency Bank alohan'ny hametrahanay azy ho anao.
WTE Hanangana ny bankinao.
Vantany vao voamarina ny fandoavanao, WTE hanangana ny Banky nomerika nomerika anao (ao anatin'ny lisansa DCB 1-3) ao anatin'ny 15 andro. Ankoatr'izay, a WTE Mpanolotsaina dia hampianatra anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba hiasa Banky Digital Currency tena mahomby.
Omeo crédit ho an'ny orinasa ONLINE.
Raha vantany vao tafapetraka ny Digital Bank anao, dia afaka miditra ianao manomboka manome vola amin'ny $ 100,000 ka hatramin'ny $ 100 miliara hamatsy ara-bola ny orinasanao na ny olon-kafa amin'ny karazan-trosa rehetra na amin'ny indostria rehetra. Raha azonao atao ny manindry ny totozy amin'ny solosaina na mikitika efijery finday dia azonao atao izany. Vita amin'ny Internet ny zava-drehetra - tsy misy fihaonana mivantana na firesahana amin'ny mpanjifa amin'ny telefaona. Vita amin'ny tsindry bokotra iray latsaky ny 60 segondra izany ary tsy andoavam-bola ho anao. Tsindrio ny bokotra eto ambany raha hijery fampisehoana video momba ny fanaovana azy.
Jereo ity horonantsary ity raha te hahalala bebe kokoa
MANAO DOLLAR AN-tapitrisany amin'ny fidiram-bola
Azonao atao ny mahazo vola an-tapitrisany dolara amin'ny alàlan'ny fanomezana trosan'ny orinasa manomboka amin'ny $ 100,000 ka hatramin'ny $ 100 miliara amin'ireo orinasa manana karazan-trosa rehetra na amin'ny indostria rehetra.
Ohatra, raha toa ka mampihatra trosa 200 tapitrisa dolara ny mpanjifanao Company Company dia azonao atao ny miditra ao amin'ny sehatra DC Bank anao mba hankatoavana ilay fangatahana sy hanomezana trosa ny kaontin'ny orinasa ABC 200 tapitrisa dolara.
Ny orinasa ABC dia afaka mandany ny trosa 200 tapitrisa dolara hividianana vokatra amin'ny mpanjifa hafa na hanova ny trosa ho vola ary hanome anao ny saram-pandraharahana amin'ny fividianany trosa. Raha toa ka 5% ny tahan'ny fandoavam-bola, dia 5% amin'ny trosa 200 tapitrisa dolara no hanomezana vola amin'ny orinasa 10 tapitrisa $ avy amin'ny orinasa ABC. Ity dia ohatra iray amin'ny fomba ahafahanao mahazo $ 10 tapitrisa isam-bolana avy amin'ny DC Bank.
DC BANK - $ 1 tapitrisa
BITON'NY BUSINESS SUITE
LIBRARY BUSINESS BUSINESS
SISTEM REVENUE BANKY
Politika sy fomba fiasa amin'ny banky
DOKUMENTA AN-DALANA DC BANK
50M + DIRECTORY ORINASA
Fanohanana 24/7 - 6 MONTHS
DC BANK - $ 10B
TEKNOLOGY TRANSFER FUND
Drafitra momba ny banky $ 10B
Fonosana famaritana CORPORATE
DOKUMENTY ara-dalàna momba ny banky
DC BANK - $ 100B
Drafitra momba ny banky $ 100B
Kaonty banky CORPORATE
Orinasa voafetra voafetra voafetra
DC BANK - TSY voafetra
DC BANK PLATFORM - TSY voafetra
Drafitra momba ny banky $ 1T
MASTERCARD / VISA CARD MAMONJY
Ny fampiasam-bolanao dia 100% arovan'ny antoka miverina amin'ny vola 90 andro!
Manana 90 andro hampiasa ny Digital Currency Bank ianao hampitomboana ny vola miditrao amin'ny 100X amin'ny famoahana ny volanao manokana. Raha afaka 90 andro dia azonao atao ny mijery azy amin'ny masonay ary milaza aminay fa tsy nahazo 100 farafahakeliny ny volanao (10,000% ROI), dia haverinay am-pifaliana ny volanao amin'ny Banky Digital Currency.
Ary, raha misy antony na tsy misy antony mihitsy aza dia maniry ny hamerenana amin'ny laoniny tanteraka ianao dia hamerina avy hatrany ny volanao. TSY misy fanontaniana apetraka ary tsy misy olana. Raha tsy izany dia manolo-tena hiasa amin'ny mpanjifa afa-po izahay. Raha tsy mahazo tombony amin'ny Digital Currency Bank ianao, dia tianay ny hamerina ny saram-panamboaranao.
MANGATAKA AMIN'NY BANKY CURRENCY DIGITAL
DC BANK 1 - VIDY = 250K $ DC BANK 2 - VIDY = 450K $ DC BANK 3 - FEE = $ 1M DC BANK 4 - FEE = $ 2.5M
Tapitra ity tolotra ity raha vao mikapoka ZERO ny TIMER!